Mune shangu dzaValeria: ndiani akazvinyora, ndezvei nezve, mavara | Zvazvino Zvinyorwa
Iwe wakambonzwa nezvazvo Mune shangu dzaValeria. Iwe unogona kunyatso rondedzera icho kune bhuku kana iyo Netflix akateedzana. Kana nezvose. Naizvozvo, panguva ino tinoda kutarisa kubhuku kuti tikurukure newe zvaunogona kuwana mariri.
Kana usati waipa mukana izvozvi, kana uri kushamisika kana zvakakodzera kuverenga mushure mekuona mhenyu-yekuita nhevedzano, iyi ndiyo mhinduro kune yako dambudziko.
1 Ndiani akanyora muShangu dzeValeria?
2 Chii chiri mushangu dzaValeria
4 Ndeapi mamwe mabhuku musaga
5 Mune shangu dzaValeria, iyo Netflix yakateedzana
6 Nei uchiverenga novel
Ndiani akanyora muShangu dzeValeria?
Iye munyori uye musiki weValeria zvakasikwa ndiye munyori Elisabet Benavent. Munyori uyu akazvarwa muna1984 muValencia uye akadzidza Kutaurirana Kwevadiovhi paUniversity yeValencia, pamwe neDhigirii raTenzi Mukutaurirana neArt kubva kuComplutense University yeMadrid. Akanga achishanda mune imwe kambani yemarudzi akawanda. Nekudaro, sezvo aive mudiki, anga ave nechido chekuverenga uye, zvakare, chekunyora.
Saka rimwe zuva akafunga kutora pfungwa dzakamuwira uye muna 2013 akaburitsa bhuku rekutanga: Mune shangu dzaValeria, idzo dzakateverwa nemamwe ese mabhuku anoumba saga.
Yakatengesa anopfuura makopi zviuru zvisere uye kunyangwe bhuku rekutanga rakatogadziridzwa kuita nhepfenyuro yeterevhizheni yakaburitswa neNetflix.
Chii chiri mushangu dzaValeria
Mubhutsu dzaValeria tinosangana nemutambi mukuru, Valeria. Ane makore makumi maviri, uye anogara muguta risina kunyorwa zita nemunyori, kana kurongedza nzvimbo yemwedzi (yakatarwa mwedzi, gore, nezvimwewo).
Valeria Iye anobva kuMadrid uye akaroora, asi rudo rwaakanzwa kune mumwe wake, uye rwakasimuka mukuyaruka, zvinoita kunge rwapera. Iye munyori, saka mukutsvaga kwake zvinhu zvechipiri bhuku, anobuda neshamwari dzake, Nerea, Lola naCarmen. Kumafaro anosangana naVictor, uye vaviri vacho vanotanga kubatana.
Iyo rongero ichatarisa pahukama ihwohwo hunomuka pakati paVíctor naValeria, uye nemabatiro aanofanira kuita nemamiriro ezvinhu aanogara, sezvo akaroora, kunyangwe asiri kuwana nguva yakanaka nemumwe wake. Ehe, usafunge kuti mubhuku rekutanga iwe uchazoziva zvinoitika pamwe nevatambi, nekuti ndiro bhuku rekutanga musaga.
Mune shangu dzaValeria ane mavara mazhinji atinogona kukusarudzira iwe. Asi izvo zvakakosha zvakanyanya ndezvi:
Valeria. Iye protagonist, mukadzi ane hunhu hwakatsiga asi, muchokwadi, akasiyana zvakanyanya nemaonekero ake.
Lola. Iye haadi kunzi Dolores, iye akanaka kwazvo, akaomesesa uye husiku humwe husitendi.
Carmen. Iye ndiye anonyanya kudiwa, anorota uye akatendeseka kwazvo kana zvasvika pakutaura chimwe chinhu.
Nerea. Ndiye shamwari yepamwoyo yaValeria kubva zvaaive nemakore gumi nemana, akanaka kwazvo uye anobva kumhuri yakapfuma. Dzimwe nguva anenge asina mhosva zvakanyanya uye anogona kuratidzika kunge ari kutonhora.
Adrian. Iye murume waValeria, waasina hukama hwakanaka naye.
Víctor. Iye ishamwari yaLola uye, kana akasangana naValeria, vanonzwa kubatana kwakasimba kwazvo.
Ndeapi mamwe mabhuku musaga
Neshangu dzaValeria hauna bhuku rine mavambo nemagumo, asi a saga rinoumbwa nevane. Ivo vese vanopa kwenguva uye kuteedzana kwezviitiko zvinoitika kune vatambi. Izvi zvinoreva here kuti iwe unofanirwa kuverengera ese? Hongu uye kwete. Kazhinji munyori anoasiya achivharira, asi nezvakawanda zvisingazivikanwe. Kana iwe wakasungirirwa, chinhu chakachengeteka ndechekuti, mushure mekutanga, unenge uri munzira yetatu inotevera.
Uye ndeapi mabhuku iwayo? Zvakanaka:
Mune shangu dzaValeria. Yekutanga yesaga uye kwayinokuzivisa iwe kune mavara. Vamwe vanoti ndiyo isina kusimba, asi zvakare nekuti inoshanda sehurukuro.
Valeria mugirazi. Kuenderera mberi kwezvose zvinoitika mubhuku rekutanga, uye kumberi iyo isina Valeria chete semutambi wayo, asiwo shamwari dzake.
Valeria mutema nemachena. Chikamu chechitatu maanofanira kusangana nacho chaicho chaasina kutarisira, asi izvo zvinokonzeresa manzwiro.
Valeria akashama. Kupera kwesaga uye dheinement yenyaya yaValeria asi, neimwe nzira, zvakare yeshamwari dzake.
Mune shangu dzaValeria, iyo Netflix yakateedzana
Sezvatakambotaura, saga Mune shangu dzeValeria ine dzakateedzana dzinoenderana. Netflix ndiye akatora kutonga kwekodzero yekugadzirisa uye akatoburitsa mwaka yakati wandei.
Zvino, avo vakaverenga zvinyorwa uye vakaona zvakateedzana vaka "disenchanted", sezvo ese aine mapoinzi akafanana, asi mazhinji asiri iwo sezvazvinoitika chaizvo mungano.
Naizvozvo, kana iwe uchinyatsoda kuziva kuti chaiko Valeria, shamwari dzake nevamwe vatambi vakaita sei, tinokurudzira kuti iwe uverenge bhuku racho nekuti harizokuodza moyo.
Nei uchiverenga novel
Chekupedzisira, hatidi kusiya uyu musoro tisingakupe zvikonzero zvekuverenga Mune shangu dzaValeria, naElisabet Benavent. Kunze kwaizvozvo yaive iyo yekutanga novel iyo yakaburitswa nemunyori weValencian, uye kuti yaive yakabudirira kwazvo, chokwadi ndechekuti pane zvimwe zvikonzero zvekuti iwe uverenge, senge icho icho chinobata nemusoro wenyaya unogona kunge wakakosha, senge manzwiro. Icho chokwadi chekuti rondedzera zvinoitika zvinogona kuzivikanwa nevaverengi, kunyanya vaverengi vechikadzi, inoita kuti ive hoko.
Uye zvakare, aya manzwiro haareve chete kune waanodanana naye, asiwo kushamwari, matambudziko ekuzviremekedza, nezvimwe. izvo, neimwe nzira, ivo vanogona kunyange kuvhura maziso evaverengi kuti vaone kuti kune vanhu vazhinji vakatambura kupfuura ivo; Kana ona dambudziko muchiono kuti ubve mu "tsime" iro kwavari.
Kunyangwe ichifanira kutariswa kuti inoverengeka, uye izvo Munyori haatsvage kupinda muzvinhu izvi, anovapa izwi kuitira kuti vanhu vanzwe kubatana nevatambi uye nemamiriro ezvinhu anorondedzerwa mubhuku.
Wakaverenga here muValeria's Shoes? Iwe unogovana zvaunofunga here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Mabhuku » Mune shangu dzaValeria